Tale jeneraly Tim Cook 5 taona, macOS Sierra beta 6, MacBook Air nohavaozina, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac | Avy amin'ny mac aho
Tale jeneraly Tim Cook 5 taona, macOS Sierra beta 6, MacBook Air nohavaozina, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Jordi Gimenez | | Mac OS X, About us, Apple products
Efa nandalo ny ekoatera tamin'ity volana aogositra ity isika ary miditra amin'ny tapa-bolana farany amin'ity volana mafana nefa mahafinaritra ity isika. Ny marina dia indraindray mety "mavesatra" ny fahavaratra raha ny hafanana no resahina, saingy maro amintsika no tsy afaka manao izany raha tsy misy izany. Ny vaovao avy any Apple na misy ifandraisany amin'ny Mac mandritra ity herinandro fohy ity ho an'ny sasany izay nanao fety tamin'ny Alatsinainy faha-15 lasa teo dia maromaro, saingy amin'ny tranonkala dia tianay ny hanasongadinana ny sasany amin'izy ireo amin'ity alahady fanangonana ity raha sanatria misy tsy azonao, azonao atao jereo izany mangina. Ka andao ary.
Ny zava-nisongadina voalohany dia ny vaovao tonga tamin'ny endrika tsingerintaona iray ho an'ilay singa manan-danja amin'ilay Apple ankehitriny, miaraka amin'ireo hatsarany sy ireo lesoka ao aminy. ny Apple CEO Tim Cook mankalaza ny 5 taona amin'ny familiana ny orinasa aorian'ny ny fanjavonan'i Steve Jobs.
Ny beta fahenina an'ny macOS Sierra Azo atokana ho an'ny mpamorona izy io ankehitriny, ary tsy isalasalana fa ny fandrosoana natao tato ho ato dia mitodika amin'ny fanitsiana sy famahana olana sasany tsikaritra ihany. Apple dia mandroso amin'ny tetikasany ary ny rafi-piasana vaovao ho an'ny Mac sy iOS, tvOS ary watchOS, dia tena akaiky hanomboka amin'ny fomba ofisialy.
Ilay tambajotra sosialy miisa 140 dia tena manakaiky ny fananana fampiharana teratany amin'ny Apple TV taranaka fahefatra. Manantena izahay fa ho lasa ofisialy tsy ho ela ity vaovao ity, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nanamafy na dia teo aza izahay dingana iray lehibe ho an'ireo mpampiasa maro amin'ity tambajotra sosialy lehibe ity.
Nohavaozina ny MacBook Air 2016 efa misy ao amin'ny magazay Espaniola Apple izy ireo. Ity dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo vaovao tianay satria nahazo fihenam-bidy lehibe izahay tamin'ny alàlan'ny fitaovana Apple tany am-boalohany na teo aza izany tsy manana fonosana vokatra vaovao ary very antoka iray taona. Na izany na tsy izany dia mety hahaliana ny mpampiasa maro izany.
Farany dia mamela anao lalao iray izay toa tena mahomby eo amin'ireo mpampiasa Mac izahay. Lalao MTB ity izay mitondra antsika amin'ny fidinana an-tsokosoko ary ahafahantsika misoroka kely ny asa isan'andro isan'andro eo alohan'ny Mac. Raha tia MTB ianao ary tianao ilay razambe, ity MTB Downhill Simulator mety ho lalao ho anao io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tale jeneraly Tim Cook 5 taona, macOS Sierra beta 6, MacBook Air nohavaozina, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Sony dia manolotra ny rafitra fampitam-pahefana fiara voalohany an'ny Apple CarPlay
Tubex, ny safidy tsara indrindra amin'ny YouTube ho an'ny iPad sy iPhone